अब संसदमा चार दल अस्तित्वमा, कसको कति सिट? :: Setopati
अब संसदमा चार दल अस्तित्वमा, कसको कति सिट? अब चार तरिकाले बन्न सक्छ बहुमतको सरकार
मनोज सत्याल काठमाडौं, फागुन २३
सर्वोच्च अदालतको नेकपाको एकीकरण खारेजीको निर्णयसँग संसदमा चार वटा दल अस्तित्वमा आएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले नेकपाको नाम सम्बन्धी मुद्दामा नेकपाको एकीकरण खारेज गर्दै पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएको हो।
योसँगै संसदमा अब चार वटा दल नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी अस्तित्वमा रहने भएका छन्।
प्रतिनिधि सभामा पूर्वएमालेको १ सय २१ सिट रहेको थियो। प्रत्यक्षतर्फ उसले ८० सिट जितेको थियो भने समानुपातिक तर्फ ४१ सिट जितेको थियो। पूर्वएमाले सांसद सानु शिवाको निधन भएकाले पूर्वएमालेको अहिले संसदमा १२० सिट छ।
नेपाली कांग्रेसले ६३ सिट जितेको थियो। उसले प्रत्यक्षमा २३ र समानुपातिकमा ४० सिट जितेको थियो। उसका विजयकुमार गच्छदार भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित छन् भने अर्का सांसद मोहम्मद अफताफ आलम जेलमा रहेका छन्।
त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले निर्वाचनमा ५३ सिट जितेको थियो। उसको प्रत्यक्षमा ३६ र समानुपातिकमा १७ सिट रहेको छ।
जनता समाजवादी पार्टीको एकीकरण पछि अहिले ३४ सांसद छन्। एकीकरण अघि राजपाका १७ र समाजवादी पार्टीका १७ सांसद रहेका थिए। जनता समाजवादीका हरिनारायण रौनियार भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित छन् भने रेशम चौधरी जेलमा रहेका छन्।
संसदमा २ सांसद भएका दलले संसदीय दल गठन गर्न पाउँछन्। संसदीय दल गठन गर्न नपाएका राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका १-१ सांसद छन्। १ जना स्वतन्त्र सांसद छन्।
यी चार पार्टी कायम भएपछि चार तरिकाले सरकार बन्न सक्छन्। पहिलो, एमाले (१२१) र कांग्रेस (६३) मिलेर प्रतिनिधि सभामा बहुमत (१३८) पुग्छ। दोस्रो, एमाले र जनता समाजवादी (३४) मिलेर पनि बहुमत पुग्छ। तेस्रो, एमाले र माओवादी केन्द्र (५३) मिलेर पनि बहुमत पुग्छ। चौथो, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी मिलेर पनि सरकार बनाउन सक्छन्।
प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन २३, २०७७, १९:०९:००
घरमा बुवा-आमा नभएको बेला सात वर्षीया बालिकामाथि बलात्कार
सिक्किममा खरेलको कथासङ्ग्रह ‘टिलो’ सार्वजनिक
कोरोना संक्रमित पूर्वराजा-रानी निर्मल निवासको सेल्फ आइसोलेसनमा
नेदरल्याण्ड्ससँग पराजित भएपछि के भन्छन् कप्तान ज्ञानेन्द्र?
भुइँचालोमा २२ घन्टा पुरिएका सोनिस अवाल
माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकका निर्णय
ओलीले सोधेको स्पष्टीकरणमा माधव नेपालसहित सांसदले जवाफ दिने
कांग्रेसले प्रदेश २ को नाममा 'मिथिला-भोजपुरा' प्रस्ताव गर्ने
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा: सातौं अधिवेशन अन्त्य
चुनाव जितेको अर्को दिन मारिए अफ्रिकी मुलुक चाडका राष्ट्रपति
प्रधानमन्त्री र महन्त ठाकुरबीच भेटवार्ता
महँगीले सरकार गिराउन सक्छ? मुराहरि पराजुली
ईश्वरका बारेमा के भन्थे बुद्ध? भिक्षु कश्यप
आमा र छोरीलाई पाठेघर उपहार सृजना पोख्रेल
भारत के चाहन्छ? देउवा के चाहन्छन्? अमित ढकाल
गुनको बदला तिर्दा पाएको तनाव प्रतिभा बराल
हजुरको कमी हुन्छ नि बाबा अमर पौडेल
फोक्सोको क्यान्सर र विस्तार डा. बिनोद ढकाल
'खै, कहाँ गए सचिव हुँदा दिनमै तीन पटक भेट्न आउनेहरु!' कान्ति न्यौपाने
पुगेन र अझै तिमीलाई? केल्सन गिरी
पिर्के सलाम अर्जुनराज पन्त
म कसरी हेर्न सक्छु तिम्रो लास! सुन्दर पन्त
आखिर को हुँ म? सपना घिमिरे
कोरोनाको उकुसमुकुस पछिको यात्रा... रोमहर्षण ढुंगेल